Apple သည် AppleCare + ကိုစပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့တွင်တိုးချဲ့ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple သည် AppleCare + ကိုစပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့တွင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
Toni Cortés | 18/09/2021 21:00 | အတော်ကြာ
အာမခံသက်တမ်းတိုးဖို့အလားအလာကနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပါပြီ AppleCare + ယခုအချိန်ထိသုံးနှစ်ကျော် ဤရွေးချယ်မှုကိုယခုနှစ်တွင်အချို့နိုင်ငံများတွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးယခုအခါစပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည်သင်၏ device ၏ AppleCare + ကိုကုန်ဆုံးရက်ထက် ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် လစဉ်အရစ်ကျပေးချေပါ၎င်းသည်စာရင်းပေးသွင်းမှုတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်ပယ်ဖျက်သည်အထိလစဉ်သက်တမ်းတိုးသည်၊ အဆုံးသတ်ရက်မရှိပါ။ သံသယမရှိ၊ ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု။
Apple သည်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည် စာရွက်စာတမ်း ထောက်ခံတဲ့နေရာမှာအဲဒါကိုပြောတာ စပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်၊ သြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်နှင့်ဗြိတိန်တို့နှင့် AppleCare + ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးနှစ်ထက်ပိုပြီးသက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်သင်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မပါပဲသင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် Apple Watch တွင်စာချုပ်ချုပ်ထားသော AppleCare + အာမခံကိုသက်တမ်းတိုးရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်ကဲ့သို့လစဉ်ကြေးပေးမည် ကြေးပေးသွင်း.
Apple သည်အာမခံသက်တမ်းတိုးရန်ဤရွေးချယ်မှုကိုလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကသြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်တို့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ယခုနောက်ဆုံး၌ဥရောပနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအပါအဝင်ပါ ၀ င်သည် Espana.
သင့်မှာမည်သည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်မဆို AppleCare + စာချုပ်ရှိနေရင်ဒီအစီအစဉ်သစ်ရဲ့အားသာချက်ကိုရယူနိုင်ပါတယ် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း AppleCare + ၀ န်ဆောင်မှု၏နောက်ဆုံး နေ့မှစ၍ Apple သည်မှတ်စုများကိုပယ်ဖျက်သည်အထိသက်တမ်းတိုးခြင်းများကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည်၊ ကုမ္ပဏီက ၀ န်ဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းများမရှိတော့သည့်ကိစ္စများအပါအ ၀ င်အချို့ကိစ္စများတွင်အကျုံး ၀ င်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်ဟုကုမ္ပဏီကထောက်ပြသည်။ ဒါဆိုရင် Apple ကမင်းကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မယ်။
စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် သင်၏ကိရိယာလွှမ်းခြုံမှုပြီးဆုံးသောအခါ Apple support website တွင် mysupport.apple.comမရ။ AppleCare + ၀ န်ဆောင်မှုသည် Apple ၏စံတစ်နှစ်အာမခံချက်ထက် ကျော်လွန်၍ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရက် ၉၀ အထိပေးသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည် hardware ပြုပြင်မှုကိုတိုးချဲ့ပြီး ၁၂ လတိုင်းမတော်တဆထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ရပ်နှစ်ခုအထိထည့်သွင်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » အတော်ကြာ » Apple သည် AppleCare + ကိုစပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့တွင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
သင်၏ iPhone အားအပြည့်သွင်းထားလျှင်မည်သို့အကြောင်းကြားမည်နည်း
iPad mini တွင် A15 Bionic chip အသစ်သည်ပါဝါအကန့်အသတ်ရှိသည်